whuk-46651 – Page 325 – WunYan
သင်တို့ မသိသေးတဲ့ ရေ (လုံးဝ) မသောက်သင့်ဆုံး အချိန်
ထမင်း အသက် ခုနစ်ရက်၊ ရေ အသက် တစ်မနက် ဆိုတဲ့ ရှေးစကား ရှိပါတယ်။ လူသားတွေ အတွက် ရေက ဘာ့ကြောင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ် ပါသလဲ (၁) ဦးနှောက် ရဲ့ ၇၅ရာခိုင်နှုန်း ကို ရေဓာတ် နဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားပါတယ်။ (၂) ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူချိန် ကို မျှတစေပါတယ်။ (၃)…
သင် ဒီ (၅) မျိုးနဲ့ လုံးဝလုံးဝ အတူတူ မအိပ်ပါနဲ့ (အရေးကြီးလို့ပါ အိပ်မိရင်တော့ ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ပါပဲ )
အတူတူမအိပ်သင့်တဲ့ အရာ (၅) မျိုး ၁. နာရီဝတ်ပြီး မအိပ်ပါနဲ့ နာရီဟာရေဒီယိုသတ္တိကြွထုတ်လွှင့်မှုအတော်မြင့်မားပါတယ်။ နာရီဟာသေးငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ၀တ်ဆင်ပြီး အချိန်ကြာကြာ အိပ်ခဲ့ရင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်အိပ်တဲ့အခါ နာရီကို ချွတ်ပြီးအိပ်ကြပါ။ ၂. အမျိုးသမီးများ ဘရာဝတ်ပြီး မအိပ်ပါနဲ့ အမေရိကားမှ ပညာရှင်များလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရအမျိုးသမီးများ ၁၂နာရီထက်ကျော်လွန်ပြီး အတွင်းခံ(ဘရာ)ကိုဝတ်ဆင်ပါကရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်မြင့်မားကြောင်းသိရပါတယ်… ဒါကြောင့် ညအိပ်ရာ ၀င်ချိန်မှာတော့ Pls sleep without…
ယောက်ျားလေးတိုင်းရှောင် မိန်းကလေးတိုင်း မဖြစ်အောင် သတိထားသင့်တဲ့ “တန်ဘိုးနည်း မိန်းမ”ဆိုတာ
သီတင်းကျွတ်ပြီ…ဝါထွက်ပြီ…။ တမင်သက်သက် ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူစုကြတယ်..။ ဝါတွင်းသုံးလ အောင့်အီးထားကြတဲ့အ သောက်အစားကိစ္စလေးတွေကို စတင်ဖွင့်လှစ်ကြမယ်ဆိုပြီး..၊ တကယ်တော့.. လူတွေက…..ကိုယ့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုယ် သွားနေကြတာပါ..။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့..ကိုယ်နဲ့ဘယ်လောက်ထိလိုက်ဖက်မလဲဆိုတဲ့ပေတံနဲ့..။ ညနေစောင်း… ကျောက်ကုန်းမှာဆုံကြမယ်..၊ YAMMYမှာလူစုံတော့ ငါးနာရီဝန်းကျင်.. အင်းစိန်ဘက်ကလာတဲ့သူလည်း ရှိတယ်.. တောင်ဥက္ကလာဘက်ကလာသူလည်းရှိတယ်။ အားလုံးက လေးဆယ်ကျော်အိမ်ထောင်သည်တွေချည်းပဲ..။ ဘီယာလောက်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြမယ်ဆိုပေမယ့် ဝိုင်းအလယ်လောက်မှာ အနက်တောင့်တွေ..အနီတောင့်တွေပါလာ တယ်။ ဘာလဲ…ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။ ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ရှာနိုင်ကြသူတွေပဲဟာ။ မိသားစုတစ်ခုကို တင့်တောင်းတင့်တယ် အ ပြင် လျှံလန်နေအောင်ထားနိုင်ကြသူတွေတောင်ပါနေတဲ့ဟာကို။…
AFC U19 ချန်ပီယံရှစ်ခြေစစ်ပွဲဝင် မြန်မာ ယူ၁၉ အသင်းအတွက် ပြည်တွင်းနည်းပြများကို တာဝန်ပေးအပ်
AFC U19 ချန်ပီယံရှစ်ခြေစစ်ပွဲဝင် မြန်မာ ယူ၁၉ အသင်းအတွက် ပြည်တွင်းနည်းပြများကို တာဝန်ပေးအပ် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် MFF သည် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ယူ၁၉ အသင်း နည်းပြချုပ်နှင့် နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များအား ယနေ့ကျင်းပသည့် MFF နည်းစနစ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်မှု အရ နည်းပြအဖွဲ့အားလုံး ပြည်တွင်းနည်းပြများ ဖြစ်ပြီး အသင်းမန်နေဂျာအဖြစ် ဦးတင်မြင့်အောင်၊ ယာယီနည်းပြချုပ်အဖြစ် ဦးချစ်နိုင်(Horizon…
ဘာပဲရောင်းရောင်း အမြန်ရောင်းထွက်စေရန် ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင် ပြုလုပ်နည်း
ဘာပဲရောင်းရောင်း ရောင်းပန်း ၀ယ်ပန်း အဆင်ပြေလိုလျှင် တနင်္ဂနွေ အစ စနေအဆုံး မည်သည့် ပစ္စည်းမဆို အောက်ပါအတိုင်း ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင်ပြုလုပ်၍ လျှင်မြန်စွာ ရောင်းချနိုင် ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက် ရပါသည်။ အိမ်၊ အိုးစသော တနင်္ဂနွေနံပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင် ပြုလုပ်ရမည့်နေ့ ————— တနင်္ဂနွေနေ့ ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ ————— ညနေ ၃း၀၀ မှ ၄း၃၀…
ရှုံးနိမ့်မှုမှ သင်ခန်းစာရယူရန် မြန်မာ လူငယ် ယူ၁၈ ကစားသမားများအား အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဆုံးမတိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက မြန်မာယူ၁၈ လက်ရွေးစင်အသင်းသားများအား တွေ့ဆုံကာ ရှုံးနိမ့်မှုမှ သင်ခန်းစာယူပြီး အနာဂတ်တွင် ယခုထက်ပို၍ အဆပေါင်းများစွာ ကြိုးစားပေးဆပ်ကြရန်အတွက် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဦးဇော်ဇော်က နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန်အတွက် စိတ်ခံစားမှုများအား ထိန်းချုပ်တတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ရှုံးနိမ့်သည့်အချိန်တွင် ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အောင်မြင်သည့် အချိန်တွင်လည်း မိမိတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကို အမြဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်…
အောင်မြင်မူမရခဲ့လို့ မြန်မာယူ၁၈ နည်းပြဘန်လာဘီကို စာချုပ်ဖျက်သိမ်း/ယင်းနေရာကို ပြည်တွင်းနည်းပြဖြင့် အစားထိုးမည်
အောင်မြင်မူမရခဲ့လို့ မြန်မာယူ၁၈ နည်းပြဘန်လာဘီကို စာချုပ်ဖျက်သိမ်း/ယင်းနေရာကို ပြည်တွင်းနည်းပြဖြင့် အစားထိုးမည် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ အာဆီယံ ယူ-၁၈ ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုရရှိအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုးနည်းပြ ဘန်လာဘီကို စာချုပ် ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘန်လာဘီအနေနဲ့ မြန်မာ ယူ-၁၈ အသင်းကို တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ယခုပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုရဖို့ ကြိုးစားပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း အောင်မြင်မှု မရခဲ့တာကြောင့် ယခုကဲ့သို့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့…
ဆရာဝန်တောင် အံ့သြသွားရတဲ့ အရူးတစ်ယောက် ရေးတဲ့ စာအုပ်
ဆရာဝန်တောင် အံ့သြသွားရတဲ့ အရူးတစ်ယောက် ရေးတဲ့ စာအုပ် အရူးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ထားတာတွေ့တော့ စိတ်ကျန်းမာရေးဒေါက်တာက မေးတယ်။ “လက်ထဲမှာ ဘာကိုင်ထားတာလဲကိုယ့်လူ” အရူးကပြောတယ် “ဒါဆရာ့အတွက်ယူလာတာဗျ စာမျက်နာ၅၀၀ပါတဲ့ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါဆရာ” ဒေါက်တာ။ ။ “ဟိုက်ရှ်… စာမျက်နာ ၅၀၀တောင်မှ ဘာတွေရေးထားတာလဲကွ”??? အရူး။ ။ “စာမျက်နာအစမှာ ဘုရင်တစ်ပါးက မြင်းစီးပြီးတောအုပ်ထဲကိုထွက်သွားပါတယ်  နောက်ဆုံးစာမျက်နာမှာတော့ ဘုရင်ဟာတောထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်” !!!! ဒေါက်တာ။…
ယောက်ျားလေးတိုင်းရှောင် မိန်းကလေးတိုင်း မဖြစ်အောင် သတိထားသင့်တဲ့ “တန်ဘိုးနည်း မိန်းမ”ဆိုတာ… !
Previous 1 … 324 325 326 … 374 Next